Home » သတင်း » LED ကို Fresnel အအေးခံခြင်းနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းလွှာ?
LED ကို Fresnel အအေးခံခြင်းနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းလွှာ?
Dallas -PrimeTime Lighting Systems ကအစွမ်းထက်က high-performance ကို LED က Fresnel များအတွက်ထုတ်လွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ဝယ်လိုအားတစ်ဦး "အဘယ်သူမျှမအပေးအယူမျှဖြတ်လမ်း" တုန့်ပြန်ထားပါတယ်။
PrimeTime အင်ဂျင်နီယာကျွမ်းကျင်မှုနှင့်သာလွန်အရည်အသွေးကို LED နှင့်ချောင်းအလင်းလ်တာနှင့်အတူထုတ်လွှင့်စတူဒီယိုအလင်းရောင်စက်မှုလုပ်ငန်းတီထွင်ဆက်လက်သိရသည်။
နောက်ဆုံးမှနှင့်တိတ်ဆိတ်စတူဒီယိုစောင့်ရှောက်သော LED မီးလုံး - NO FAN ။
မြင့်မားတဲ့တည်ဆောက်အရည်အသွေးလူသိများထုတ်လုပ်သူ, သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အကြောင်းကိုဗီဒီယိုအသစ်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏ PrimeTime Youtube ကိုစာမျက်နှာကို update ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ www.youtube.com/channel/UCFtNi-xcCjMCM93cTaAypAA
LED ကို Fresnel အအေးခံခြင်းနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းလွှာ? - သြဂုတ်လ 1, 2017
ဗီဒီယိုစီးရီးနဲ့အတူ PrimeTime Lighting ပွဲနှစ်မြောက် - ဇူလိုင်လ 13, 2017
PrimeTime အလင်းတဲ့နေရာမှာဂု 51 LED ကို Fresnel ကိုလည်းအဆင့်မြှင့်တင် - ဇွန်လ 5, 2017
1SLED ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ chief Engineer GUS51LEDFresnel အယ်လ်အီးဒီ LED ကို Fresnel MSLED ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2017-08-01
နောက်တစ်ခု: IBC2017 ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်မှာ utah သိပ္ပံ
ဟေ့လုပ်ပြီး Buddy !, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဤအချက်အလက်တွေ့ရှိခဲ့: "LED ကို Fresnel အအေးခံခြင်းနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများ?" ။ http://www.broadcastbeat.com/questions-about-led-fresnel-cooling/: ဒီမှာက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။